Maitiro ekubvisa zvakachengeteka Evolution | Kubva kuLinux
Wakamboedza here kubvisa iyo Evolution email chirongwa chinouya nekumira muUbuntu? Kana zvirizvo, iwe unonyatsoziva kuti inogona sei kuve musoro. Dambudziko, chaizvo, riri nyore kwazvo. Mamwe eEvolution mapakeji kutsamira kwemamwe mapakeji uye aya, kana Evolution ikaburitswa, inoda kukumbira kuti isunungurwe uye kuti irege "kuputsa" kutsamira.. Iye zvino, dambudziko nderekuti mapakeji aya, ayo ane kutsamira kwevamwe vacho vanoumba Evolution, ndiwo makiyi ekushanda chaiko kweUbuntu. Neichi chikonzero, kana uchiedza kuburitsa Evolution seiyi ...
sudo apt-tora bvisa shanduko *
... akawanda mamwe mapakeji achazoda kusunungura, iyo yakakosha kuve iwo ane hukama negnome pani uye inozivikanwa meta-package ubuntu-desktop (iyo pachayo isingaise chero chirongwa asi inotaura zvese mapakeji anoumba "zvakajairika" Ubuntu kuisirwa uye, nekudaro, kana isina kuiswa, Ubuntu haigone kuvandudzwa kana vhezheni itsva yaonekwa).
Zvikonzero zvekuda kudzima Evolution
Linux inotipa chimwe chinhu chikuru, chikuru chaizvo: rusununguko. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinoreva kuti kana tisingade chirongwa, tinochidzima uye ndizvozvo. Kana tichida zvimwe zvekare tinozviisa uye ndizvozvo. Mune mamwe mazwi, haitidi kuti tishandise software chaiyo. Iwo mapurogiramu anouya nekusarudzika mumadhizaari, ngatitii, "mazano", asi hapana chimwezve. MuWindows, sekuziva kwedu, izvi zvakasiyana zvachose.
Ngatitii ndinoda Thunderbird zvirinani, semuenzaniso. Zvine musoro here kuti paiswe email vatengi vaviri, kunyanya kana paine imwe yandisingashandise zvachose?
Imwe nyaya yakajairika: Ini ndinotarisa ese emaemail angu kuburikidza newebhu vatengi (GMail, Yahoo, Hotmail, nezvimwewo). Ergo, ini handidi Evolution uye ndinoda kuidzima.
Ndiri kuda disk space !! Ini ndato bvisa ese ma cache, mafaera echinguvana, zvese ... uye zvakadaro ndiri mupfupi ... Ah, ndinoziva, ndiri kuzodzima icho chidiki chirongwa chandisina kumboshandisa. Chainzi chii? Ah hongu: Evhangeri.
Muchidimbu, zvikonzero zvinogona kuve zvakawanda uye zvakasiyana. Chaizvoizvo kutaura, mhinduro yandinopa pazasi haina kudzima zvachose Evolution, asi inouya padhuze. Panyaya yechiitiko chevashandisi, Evolution inozonyangarika kubva kuApplication menyu uye 53.3 MB yediski nzvimbo ichasunungurwa.
Isu tinovhura iyo terminal uye tinyore:
Sudo aptitude purge shanduko-chiratidzo shanduko kushanduka-zvinyorwa-en shanduko-yakajairika shanduko-data-server shanduko-webcal shanduko-plugins
Update: Ndakagamuchira zvimwe zvirevo zvichiti nzira iyi "yakaputsa" data remunhu. Kunyanya, kana uchibvisa shanduko-dhata-server, Sisitimu> Zvaunofarira> Nezvedu zvinova zvisingaite. Izvi ichokwadi chose. Nekudaro, ini handizive nezve chero munhu anonyatso zadza iyo data, uye ini handizive nezve chero chishandiso chinoshandisa icho. Zvisinei, kana iwe usiri kuda kuti izvo zvirege kushanda, ini ndakangosiya evhangeri-data-server mune iri pamusoro rairo
Imwe yekupedzisira kutaura usati wandibvunza. Ehe, unogona kudzima Evolution kubva kuSynaptic kana neimwe yeidzi nzira ...
sudo kukodzera kuchenesa shanduko
sudo apt-tora kuchenesa shanduko
... asi nzira iyi inongoburitsa 8MB yediski nzvimbo (ichipesana ne53,3 yemaitiro angu) uye ichasiya akawanda "nherera" mapakeji.
Ndokumbirawo usanzwisise iyi posvo. Evhangeri chirongwa chikuru, munzira dzese. Ini handifunge kuti zvakaipa kuti zvinouya nekutadza muUbuntu. Chinondinetsa ndechekuti hazvisi nyore kuidzima. =)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekubvisa zvakachengeteka Evolution
Mhoro, ndinokutenda. Ini ndakatoburitsa Evolution uye ikozvino ndine Thunderbird, asi pane dambudziko diki. uko ndisati ndadzvanya pa "mail", kuti muUbuntu Lucid (ini ndiri mutsva uye handizive kuti zvaive sei mune mamwe mavhezheni), uye Evolution yakaonekwa, asi ikozvino ndobaya pa "Mail" uye hapana chinoonekwa. Ndinoziva kuti ndinogona kuvhura Thunderbird muApplication → Internet → Mozilla Thunderbird Mail / Nhau, asi ini ndoda iyo yekukurumidza kuwana kushanda sezvayakamboita neEvolution ... dambudziko rakareruka, kutaura zvazviri, harisi dambudziko. Nekudaro kana paine chero munhu anoziva maitiro ekugadzirisa izvo, ini ndingafarire.
Mhoro! Zvichida chinyorwa ichi chinogona kukubatsira iwe kuita izvo:
Daniel vega akadaro
Dambudziko nderekuti ini ndakatobvisa Evolution nenzira isiri iyo (ndinofungidzira) uye ikozvino handikwanise kupinda, ndinofunga inguva yekumisikidza, mhoro!
Pindura kuna Daniel Vega
Dario Guzman akadaro
Pamwe ndanonoka asi kana watoibvisa senge yakanga isipo, unofanira kutanga mu console mode (mu ubuntu isati yatakura) ne ctrl + alt + F1, wobva waisa gnome-shell nemurairo uyu «sudo apt -get gnome -shell "wobva wadzokorora uye kusimudzira" sudo apt-tora yekuvandudza && sudo apt-tora kusimudzira "uye ingo reboot uye inofanira kushanda.
PS: Ini ndakaibvisawo sezvo yanga isiri 😀
Pindura Dario Guzman
Mhoro! Unoziva ndakatozvigadzirisa. Ini ndaisa yekukurumidza kuwana, padhuze neiyo firefox yekuwana, ndakabvisa iyo icon kubva muhamvuropu uye ndokuisawo imwe tsitsi icon zvakare. zvese zviri nyore izvozvi! Handirangariri kuti ndakazviita sei. Asi zvese zvinoshanda mushe, Thanks! 🙂
Izvo hazvishande zvakanyanya, muDebian inokukwevera kune iyo gnome-control-Center uye ini zvirinani kuti ndisakuudza zvakawanda ... Kana ndikarangarira nemazvo, ndinofunga ndanga ndichiedza muUbuntu kubvisa ese Evolution mapakeji asina kukanganisa iyo system uye ini ndakazviita ... nenzira yakafanana neyaunokurudzira, kubva kuSinaptic uchiona kuti pasuru yakadaro yakatakurwa mubut.
Pindura kuna vinigris
Izvo chaizvo zvakafanana zvakaitika kwandiri, nekukurumidza ...
Iko hakuna nzira yekusa fomati ????
Xulrunner ndiyo hwaro hwe firefox uye python ipuratifomu yekuronga pane ayo mazhinji mapurogiramu akavakirwa. Kana iwe uine yambiro iyoyo, usadzime chero chinhu. Pamwe rairo idzi (idzo dziri muchikumbiro) dzatove yechinyakare mune idzva Ubuntu vhezheni (kana ivo vakachinja zvinoenderana nepakeji).
Luis Mercado akadaro
Ndakaedza izvi paNatty (Ubuntu 11.04) uye kugona kwakandiudza kuti zvaizobvisawo xulruner uye python, saka ndakanzura rairo.
Pindura Luis Mercado
Mhoro, zvakanaka, chii chaitika kwandiri ndechekuti hazvindibvumidze kunyoresa maakaundi eGoogle kana makarenda eGoogle, chii chandingaite?
Ini ndiri anokudzwa muUbuntu,
Wakaedza kudzvanya Alt + Ctrl + F1 uye kuisa Evolution zvakare? Mufaro! Paul.
Sirivheri Mukoma akadaro
Ndakaedza kushandisa rairo ... uye mushure mekunge yandibvunza password ndakawana inotevera meseji yekukanganisa:
sudo: aptitude: raira haina kuwanikwa
Pindura kuSilver Mukoma
Izvo zvakaitika ndezvekuti iyo nyowani vhezheni yeUbuntu haichauyi neAptitude chirongwa nekutadza. Pamberi, iwe waigona kushandisa kukodzera kana apt-tora, ikozvino chete apt-tora. Sezvo vanhu vazhinji vaishandisa apt-tora, vakafunga kubvisa kukodzera.
Saka kuti kodhi ishande, ingo dzosera izwi kukodzera x apt-tora.
Ndapota ndinoda rubatsiro. Ini ndaida kudzoreredza Evolution muFedora 20 nekuti yaive nedambudziko uye ndakaibvisa neyum remove, ikozvino handisi kuwana kuti ndingaiisa sei zvakare nekuti. Ndingafarire chaizvo kana iwe uchikwanisa kundipa ruoko kune izvo.
Eduardo Natali akadaro
Mhoro vamwe vako, kudzima shanduko, ngatiitumidze zita uye voila, haina kuisungira pakutanga, hapana chikonzero chekuburitsa chero pakeji inoputsa gnome.
mv / usr / lib / shanduko-data-server / usr / lib / shanduko-data-server-yakaremara
mv / usr / lib / shanduko / usr / lib / shanduko-yakaremara
Pindura Eduardo Natali
Iti HAPANA kuWindows Mutero!